Ozi Ọma Mak Dere 13:1-37
ỌGWỤGWỤ OGE (1-37)
Agha, ala ọma jijiji, ụkọ nri (8)
A ga-ekwusa ozi ọma (10)
Oké mkpagbu (19)
Ọbịbịa Nwa nke mmadụ (26)
Ihe atụ osisi fig (28-31)
Na-echenụ nche (32-37)
13 Mgbe o si n’ụlọ nsọ ahụ na-apụ, otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya: “Onye Ozizi, ị̀ hụkwara otú nkume ndị a na ụlọ ndị a si buo ibu ma maa mma?”+ 2 Ma Jizọs sịrị ya: “Ị̀ hụrụ nnukwu ụlọ ndị a? A ga-akwatucha nkume ndị a. E nweghị otu a ga-ahapụ n’elu ibe ya.”+ 3 Mgbe ọ nọ ọdụ n’Ugwu Oliv, chee ihu n’ụlọ nsọ ahụ, Pita, Jems, Jọn, na Andru jụrụ ya mgbe naanị ha na ya nọ, sị: 4 “Gwa anyị, olee mgbe ihe ndị a ga-eme? Gịnị ga-abụkwa ihe àmà ga-egosi na ọgwụgwụ ihe ndị a niile eruola?”+ 5 Jizọs malitere ịsị ha: “Lezienụ anya ka onye ọ bụla ghara iduhie unu.+ 6 Ọtụtụ ndị ga-abịa n’aha m, sị, ‘Ọ bụ m bụ ya.’ Ha ga-eduhiekwa ọtụtụ ndị. 7 Mgbe unu na-anụkwa mkpọtụ agha na akụkọ agha, unu atụla ụjọ. Ihe ndị a ga-emerịrị. Ma ọgwụgwụ erubeghị.+ 8 “N’ihi na mba ga-alụso mba ọzọ agha, alaeze ga-alụsokwa alaeze ọzọ agha.+ A ga-enwe ala ọma jijiji n’ebe dị iche iche. A ga-enwekwa ụkọ nri.+ Ihe ndị a bụ mmalite ihe mgbu.*+ 9 “Ma kpacharanụ anya. Ndị mmadụ ga-akpụpụ unu n’ụlọikpe obodo,+ a ga-etikwa unu ihe n’ụlọ nzukọ.+ A ga-eme ka unu guzoro n’ihu ndị gọvanọ na ndị eze n’ihi m, ka unu si otú ahụ gbaara ha àmà.+ 10 A ga-ebukwa ụzọ kwusaa ozi ọma ná mba niile.+ 11 Mgbe ha kpụ unu na-aga n’ụlọikpe, unu ebula ụzọ na-echegbu onwe unu maka ihe unu ga-ekwu. Kama kwuonụ ihe ọ bụla a ga-agwa unu kwuo n’oge ahụ, n’ihi na ọ bụghị unu na-ekwu, kama ọ bụ mmụọ nsọ na-ekwu.+ 12 Nwanne ga-enyefe nwanne ya n’aka ndị iro ka e gbuo ya, nna ga-enyefekwa nwa ya. Ụmụ ga-emegide nne na nna ha ma mee ka e gbuo ha.+ 13 Mmadụ niile ga-akpọkwa unu asị n’ihi aha m.+ Ma, ọ bụ onye tachiri obi* ruo ọgwụgwụ+ ka a ga-azọpụta.+ 14 “Ma mgbe unu hụrụ ihe arụ nke na-akpata mbibi+ ka o guzo n’ebe ọ na-ekwesịghị iguzo (onye na-agụ ya,* ya gbalịa ghọta ya nke ọma), ka ndị nọ na Judia malite ịgbaga n’ugwu.+ 15 Ka onye nọ n’elu ụlọ ghara ịrịdata, ya abanyekwala n’ụlọ ya ka o were ihe ọ bụla. 16 Onye nọ n’ubi, ya alaghachila ka ọ chịrị uwe elu ya. 17 Ụmụ nwaanyị dị ime na ndị ji nwa n’aka n’oge ahụ ga-ata ahụhụ.+ 18 Na-ekpenụ ekpere ka ọ ghara ime n’oge oyi, 19 n’ihi na oge ahụ ga-abụ oge mkpagbu+ nke a na-enwetụbeghị ụdị ya malite mgbe Chineke kere ihe ruo n’oge ahụ, a gaghịkwa enwe ya ọzọ.+ 20 N’eziokwu, ọ bụrụ na Jehova* emeghị ka oge ahụ dị mkpirikpi, e nweghị onye* a ga-azọpụta. Ma n’ihi ndị ọ họọrọ, ọ ga-eme ka oge ahụ dị mkpirikpi.+ 21 “Mgbe ahụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla asị unu, ‘Lee, Kraịst nọ n’ebe a,’ ma ọ bụ ‘Lee, ọ nọ n’ebe ahụ,’ unu ekwela.+ 22 N’ihi na a ga-enwe Kraịst ụgha dị iche iche na ndị amụma ụgha.+ Ha ga na-arụ ọrụ ebube ma na-eme ihe ịtụnanya dị iche iche iji duhie ndị Chineke họọrọ, ma o kwe ha omume. 23 N’ihi ya, lezienụ anya.+ Agwala m unu ihe niile tupu oge ha ga-eme eruo. 24 “Ma n’ụbọchị ndị ahụ, mgbe mkpagbu ahụ gachara, anyanwụ ga-agba ọchịchịrị, ọnwa agaghịkwa enye ìhè ya.+ 25 Kpakpando ga-esi n’eluigwe na-ada, a ga-emekwa ka ihe* ndị dị n’eluigwe maa jijiji. 26 Mgbe ahụ, ha ga-ahụ Nwa nke mmadụ+ ka ọ na-abịa n’ígwé ojii n’ike na ebube dị ukwuu.+ 27 Mgbe ahụ, ọ ga-ezipụ ndị mmụọ ozi. Ha ga-esikwa n’akụkụ anọ nke ụwa* chịkọta ndị ọ họọrọ, malite na nsọtụ ụwa ruo na nsọtụ eluigwe.+ 28 “Sinụ n’osisi fig mụta ihe: Ozugbo alaka ọhụrụ ya dịwara nro ma pupụtawa akwụkwọ, unu na-ama na oge osisi ji amị mkpụrụ eruwela.+ 29 Ma ununwa, mgbe unu hụrụ ka ihe ndị a na-eme, maranụ na Nwa nke mmadụ nọ nso n’ọnụ ụzọ.+ 30 N’eziokwu, ana m asị unu na e nweghị ihe ga-eme ka ọgbọ a nwụchaa ruo mgbe ihe ndị a niile mere.+ 31 Eluigwe na ụwa ga-ala n’iyi.*+ Ma, e nweghị ihe ga-eme ka okwu m laa n’iyi.*+ 32 “E nweghị onye ma ụbọchị ma ọ bụ awa ọ ga-abụ. Ndị mmụọ ozi nọ n’eluigwe amaghị, Ọkpara ahụ amaghịkwa, kama naanị Nna m ma.+ 33 Na-elenụ anya, mụrụnụ anya,+ n’ihi na unu amaghị oge ọ ga-abụ.+ 34 Ọ dị ka nwoke jewere mba ọzọ, nke hapụrụ ụlọ ya ma nye ndị ohu ya ikike ka ha lekọtawa ya.+ O nyere onye nke ọ bụla ọrụ ọ ga-arụ, nyekwa onye nche ọnụ ụzọ iwu ka ọ na-eche nche.+ 35 N’ihi ya, na-echenụ nche, n’ihi na unu amaghị mgbe nna nwe ụlọ ga-abịa,+ ma ọ̀ bụ ná mgbede, ma ọ̀ bụ n’etiti abalị, ma ọ̀ bụ tupu chi abọwa,* ma ọ̀ bụ n’ụtụtụ,+ 36 ka ọ ghara ịhụ unu ka unu na-ehi ụra ma ọ bịa na mberede.+ 37 Ma ihe m na-agwa unu ka m na-agwa mmadụ niile: Na-echenụ nche.”+
^ Ya bụ, ụdị ihe mgbu nwaanyị na-enwe ma ọ mụwa nwa.
^ Ma ọ bụ “onye na-atachi obi.”
^ Ya bụ, amụma Daniel buru.
^ Na Grik, “ifufe anọ.”
^ Na Grik, “mgbe oké ọkpa ji akwa.”